Wasaaradda Caafimaadka oo xaqiijisay 54 ruux oo kiisas cusub COVID-19 iyo tirada oo gaartay 582 ruux - Jowhar Somali Leader
Home Somali Wasaaradda Caafimaadka oo xaqiijisay 54 ruux oo kiisas cusub COVID-19 iyo tirada...
Wasaaradda Caafimaadka oo xaqiijisay 54 ruux oo kiisas cusub COVID-19 iyo tirada oo gaartay 582 ruux
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in la diiwaan geliyay 54 xaalado cusub oo COVID-19 ah oo 40 ka mid ah ay rag yihiin 14-na ay haween yihiin. Dhammaan bukaannada cusub waxaa laga diiwaan geliyay gobalka Banaadir. Hal bukaan ayaa ka bogsooday xanuunka.
Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay waxey gaartay 582, waxaana ka bogsooday labaatan Ruux. 28 ruux ayaa u geeriyootay cudurka.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqday inay qaataan talooyinka caafimaad iyo amarrada dowladda ee qaybta ka ah qorshaha xakameynta faafitaanka Feyryska Karoona
Dowladda ayaa sameysay qorshe guud oo lagu xakameynayo faafitaanka iyo saameynta kale ee COVID-19. Waxaa la hir geliyay Isbitaallo lagula tacaalo bukaannada uu haleelo Feyruska Karoona, waxaana dalka soo gaaray qalab caafimaad oo dowladdu soo iibsatay.
Taageero isugu jirta qalab caafimaad iyo dawo qayb ka ah awood siinta dowlad gobaleedyada ayaa dowladdu gaarsiisay qaar kamid ah Dowlad gobaleedyada iyada oo sidoo kale taageero taa lamid ah la gaarsiinayo dowlad gobaleedyada kale.
Madaxda dalka oo loo gudbiyay cabasho ka dhan xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federalka